माइतीनै भुल्नेगरि बेल्जियममा मनाए तीज
अगस्ट २५, २००८
–पुरुशोत्तम सुबेदी (तस्बिरपनि), बेल्जियम तिज आयो भन्छन सबै माइत जान्छन मै चेली अभागिनी कसका माइत जाम । साँच्चैनेपालमा नेपाली नारीहरुको दु:ख बेदना पोख्ने एउटा बिश्राम स्थल तिजको दिन पनि हो । यो दिन नेपालका सबै नारीहरु आफ्नो...
बेइजिङ ओलम्पिक: एक अविस्मरणिय यात्रा
अगस्ट २४, २००८
(साँच्च्किकै ओलम्पिक खेल कस्तो थियो ? त्यति महँगो टिकट किनेर के कोही नेपाली त्यहाँ गए होला ? त्यो खेल प्रत्यक्षरुपमा हेर्ने अवसर पाउने नेपालीको अनूभव कस्तो होला ? नेपालप्लसका एक जना पाठक ले हिजोको खेल प्रत्यक्ष हेरेर...
सुडानको शान्ति सेनामा एक नेपाली
आशिस थापा, सुडान (केन्या) म भारतिय सेनामा कार्यरत एक नेपाली हुँ आशिस थापा (तस्बिरको बिचमा) । त्यहि अन्तर्गत सुडानमा कार्यरत छु अहिले । अनमिन को मातहतमा रहेर । म यहाँ छ महिनाका लागि मात्रै आएको हो । यहि सेप्टेम्बर...
प्रचण्डको जन्मस्थल घुमेर हेर्दा
अगस्ट १५, २००८
प्रचण्ड संझेर रोए उनका पिता (बायाँ प्रचण्डका काका, बिचमा उनकि धाइ आमा देवकि र दहाल परिवारकै एक महिला चिन्द्राग्रस्त मुद्रामा । फाइल तस्बिर-ददि सापकोटा) । २०५८ सालको तेस्रो हप्ता । कसैले सुनायो-प्रचण्डकि आमा बितिन तर उनकि...
यस्तो घरमा जन्मिएका थिए हाम्रा नयाँ प्रधानमन्त्रि (विशेष तस्बिर) ।
(फाइल फोटो-ददि सापकोटा) । गणतन्त्र नेपालको प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दहाल (प्रचण्ड) २०११ साल मंसिर २६ गते जन्मिएको घर यहि हो । कास्की ढिकुर पोखरी गाविस-२ मा । यो तस्बिर २०५८ साल असार २९ गते खिचेको हुँ...
महाराजाले भने-तपाईहरुले बहादुरी गर्नुभो
अगस्ट १३, २००८
नेपालको हिमालमाथि पहिलो मानवबिजय सन १९५० मा भएको हो । तर चर्चा भने नेपालमा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र सर एडमण्ड हिलारीले १९५२ मा गरेको सगरमाथा आरोहणको बढि हुनेगर्छ । सन १९५० मा फ्रान्सेली आरोहण दलका सात जनाले...
दर्शक सयौं, नाच्ने पाँच वर्षे वालिका
अगस्ट ९, २००८
पाँच वर्षकी बच्चि सयौ मान्छेका अगाडि छमछमी नाछिन रे भन्दा हत्त पत्त कसले पत्याउँछ र ? आम मानिसहरुले झैं आफुलेपनि पत्याइएन नै । थुप्रैले सुनाए-अस्मिता अधिकारी र अर्कि बच्ची नीकिता उपाध्याय छमछमी नाच्छन रे । यसो कुनै...
अगस्ट ३, २००८
इजरायल र प्यालेष्टाइनीहरु बिचको लडाइका बारेमा सबैलाई थाह नै छ । हजारौं मारिए । लाखौं घरबार बिहिन भए। देशमा कतिखेर कहाँ ज्यान जाने हो पत्तो हुँदैन। परिवारका सद्स्यमध्ये कतिखेर कहाँ को गुम्ने हो थाह छैन । कोहि...
जुलाइ २०, २००८
के प्रेम मानिसले मात्रै गर्छन ? प्रेम, स्नेह, माया र मोह मान्छेमा मात्रै हुनुपर्छ र ? मानिसहरु ठान्छन-मानव प्रेम विचित्रको छ । मानव संसार प्रेममा अडेको छ । तर प्रेम हरेक जिवजन्तुमा हुन्छ । भिन्नता थाह हुने...
आईफलटावरमाथि नेपाली झण्डा
जुलाइ १०, २००८
नेपाली झण्डाको आकर्षण साँच्चिकै अचम्मको छ । यो झण्डाको बनावट त्रिकोण परेकालेपनि त्यसो भएको हो। चन्द्र र सूर्य नचिन्ने कोहि हुँदैन। त्यो सट्ट देखिँदा नचिन्नेलाईपनि आकर्षण गर्ने रहेछ। नेपाल हिमालै हिमालको देश। यसो हेर्दा हिमाल जस्तो देखिनाले...